Nezve mvuu ine mvere. Izvi tinoziva kubva Kubuntu 21.04 | Linux Vakapindwa muropa
Diego ChiGerman Gonzalez | | Kugoverwa, General, GNU/Linux
Rimwechete yakaburitswa Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla, ivo vanogadzira vanosvika kuzoshanda pane inotevera vhezheni. Kunyangwe zvave kutanga kwazvo kuti uzive kuti ayo ekupedzisira maficha achave (kunyanya naMark Shuttleworth akabatanidzwa) tinogona kutora mhedziso zvine musoro nezve izvo isu zvatingazviwana tiri nazvo.
1 Nezve mvuu ine mvere uye hunhu hwayo
1.2 Sunungura purogiramu.
1.3 Pasuru yekuvandudza
1.4 Faster Snap Packs
Nezve mvuu ine mvere uye hunhu hwayo
Zvinozivikanwa kuti zita rekuparadzirwa kwega kwega rinotevera arufabheti uye kuti inosanganisira chipikisheni uye mhuka. Kwakave kutendeuka kwedemo uye nezuro zvakazoitika kuti chirevo chakasarudzwa chaive hirsute (furry).
Kune vateveri vezviverengero ngatitaurei kuti ndiko kugoverwa kwechitatu kunoshandisa tsamba H, yekutanga yaive Hoary Hedgehog muna2005 uye yechipiri yaive Hardy Heron muna2008 uye yakawedzera rutsigiro.
Mhuka inozoperekedza chipikisheni chine mvere haina kusara iri mvuu; Mune mamwe mazwi, zita rakasarudzwa ndiHirsute Hippo.
Mvuu imhuka huru yemumvura yemuAfrica ine ganda rakakora, shaya hombe uye mazino anoyevedza.
Zita ravo rinoreva bhiza rerwizi muchiGreek uye vanogona kumhanya zvakanyanya pasi kusvika 30 km / h, uye mumvura inosvika 8 km / h. Kuva mhuka dzinodya mhuka, dzinodya kusvika ku36 kilos yehuswa pazuva uye murume mukuru anogona kurema anosvika matani 4,5.
Vasati vandipomera kuti ndaisa iyi dhata kutevedzera iwo mashoma huwandu hwemazwi ayo maLinux Addict anondibvunza (Tinoziva mumwe nemumwe!) iyo mhuka uye chipikisheni zvakasarudzwa kutumidza yega vhezheni yeUbuntu inoedza kumiririra hunhu hunotsvagirwa vhezheni itsva.
Ini ndinofungidzira kuti izvo izvo vanhu vari kutarisira Ubuntu vachatsvaga ndeyekuti lvhezheni itsva inokurumidza munzvimbo dzese. Asi kana iwe uchida kuita jee kuti ichave inorema, inoshandisa masosi distro, iwe une fomu yekutaura pazasi.
Kuvandudza Ubuntu 21.04 Hirsute Hippo Ichatanga China inotevera, Gumiguru 29 uye mazuva anotevera mifananidzo yekutanga ichave iripo iyo isingazosiyana zvakanyanya kubva pa20.10
Kubvumbi 1 (Ehe, iro zuva reAnglo-Saxons mapenzi) iyo yekutanga beta inogona kutorwa pasi, nepo lIyo yekupedzisira vhezheni, kana zvese zvikafamba mushe, ichave ichiwanikwa musi wa22 wemwedzi mumwe chetewo.
Kunze kwekunge Shuttleworth yaitika kuti idzokere kuUni kana kushandura KDE (Tariro Mwari anoverenga Linux Junkies) iyo huru vhezheni desktop ichave GNOME 3.40 iyo ichaburitswa munaKurume gore rinouya. Pamwe, iyo Linux kernel vhezheni yakaverengerwa 5.11. Iyo Python vhezheni inosanganisirwa inogona kuve 3.39.
Faster Snap Packs
Kana isu tese tikabvumirana pane chimwe chinhu, ndizvozvo zvirongwa zvinoshandisa iyo Snap packet fomati inononoka kutanga. Ndinovimba izvi zvinogona kuchinja.
Vagadziri vari kuyedza kushandiswa kweye nyowani yekumisikidza algorithm yeSnap iyo inopa maviri kana katatu kupora mune app kutanga nguva.
Nokusingaperi, Snap yakarongedzwa senge kuverenga-chete yakadzvanywa squashfs faira system uchishandisa XZ algorithm. Izvi zvinokonzeresa padanho repamusoro rekumanikidza asi zvinoda simba rakawanda rekugadzirisa kudzvanya uye kuwedzera iyo faira sisitimu yekushandisa. Nekudaro kunonoka kunotora kuti iko kunyorera kutange. Izvi zvakare zvinonyanya kuoneka chete pane yekutanga kuvhurwa, iyo data rekushandisa risati rachengetwa mundangariro. Zvinotevera zvinoburitsa izvi hazvioneke zvakanyanya.
Kuvandudza nguva yekutanga, kwakasarudzwa kushandisa imwe algorithm - LZO - iyo inopa kushomeka kushoma, asi inoda kushoma simba rekugadzirisa kupedzisa chiitiko. Iyo zvakare ine yepamusoro nhanho yekuenderana pamwe akasiyana mamiriro ezvekushandisa kweiyo Snap mapakeji.
Miedzo yekutanga yakaitwa neiyo Chromium browser uye yakapa zvinotevera.
Iyo snap yakatsikirirwa neiyo XZ algorithm inorema 150 MB, nepo iyo iri kushandisa iyo LZO compression ine saizi ye250
Iyo Snap inoshandisa iyo LZO yekumanikidza algorithm inopa 40-74% kuvandudzika mukutonhora kutanga pane iyo inoshandisa iyo XZ compression.
MuKubuntu 18.04, iyo LZO fomati package inotora ingangoita nguva yakafanana kubhucha seiya yakaiswa kubva kuchinyakare repositori.
MuFedora 32 iyo LZO-yakamisikidzwa Snap package yaive nekukurumidza kupfuura iyo Repository RPM package.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Nezve mvuu ine mvere. Izvi isu tinoziva kubva Ubuntu 21.04
LibreOffice 7.0.3 yakaburitswa neanopfuura makumi mapfumbamwe ekugadzirisa uye kugadzirisa kunowirirana